HVC Capacitor dia mpanamboatra matihanina vao misondrotra amin'ny capacitors seramika avo lenta sy resistors malefaka. Hita tao amin'ny 1999, miaraka amin'ny orinasa famokarana 6000sq metatra any atsimon'i Shina, izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny singa malefaka avo lenta, toy ny HV seramika capacitor sy HV resistor famokarana mahazatra. Izahay no hany mpanamboatra eken'ny mpanjifa iraisam-pirenena izay nampiasa ny entana TDK, Vishay na Morgan. mpamatsy mpamokatra capacitor avo lenta.
Ho an'ny capacitors seramika HV miaraka amin'ny volavolan-dalàna DC avy amin'ny 1kv ka hatramin'ny 50kv ary ny capacitance hatramin'ny 15000pf amin'ny 40KV. Vishay na Murata no ampiasainay. Izahay dia mamokatra fomba kapila seramika sy fomba fandoroana varavarana. Ny satroka HV style doorknob dia efa be mpampiasa any Etazonia sy ny indostrian'ny grid marani-tsaina any Alemaina. HV seramika kapila capacitor nankatoavin'ny Fortune 500 orinasa sy ny fitaovana ara-pitsaboana mpanamboatra.
Ny fanoherana HV dia sarimihetsika matevina tsy inductive karazana, coating surface, naorina-in avo malefaka, habe kely indrindra, hery lehibe kokoa, midadasika kokoa endri-javatra fanoherana. Hery avy amin'ny 1 / 4W ka hatramin'ny 50W, fanoherana 10-1000M, mihatra tsara amin'ny AC, DC pulse circuits. Mifanaraka amin'ny ROHS tsy misy firaka. Ny mpanjifa dia afaka mampiasa ny HV resistor mba hifanaraka ny HV satroka entana.
Mino izahay fa ny fikatsahana kalitaon'i Alemaina sy ny paikadin'ny vidin'ny aziatika dia hahatonga anay ho tsara ho tsara!